Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai na Amsterdam ụgbọ elu si Prague oyi a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai na Amsterdam ụgbọ elu si Prague oyi a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai na Amsterdam ụgbọ elu si Prague oyi a.
Usoro ụgbọ elu oyi nke 2021: Njikọ ozugbo site na ọdụ ụgbọ elu Prague ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 ebe na-abawanye ugboro na ụzọ ndị dị ugbu a.
A ga-enwe njikọ ọhụrụ a na-enye n'oge oge oyi. Wizz Air ga-enye ụgbọ elu si Prague gaa Rome, Catania na Naples, ebe Smartwings na-agbakwunye ụgbọ elu na Dubai na London.
Ụzọ na-aga Tel Aviv ga-eji ụgbọ elu Israel, Blue Bird Airways na Arkia ụgbọ elu na-arụ ọrụ n'oge oyi 2021.
A ga-enwekwa ụzọ ọhụrụ kpamkpam n'oge oyi a, ya bụ ụzọ Prague - Odessa, na Bees Airline, na SkyUp ụgbọ elu ọhụrụ njikọ Kyiv. Ụzọ ọhụrụ nke Ryanair ga-eme ka ịnweta Warsaw na Naples dịkwuo mma.
Na Sọnde, Ọktoba 31, 2021, usoro ụgbọ elu oyi na-amalite, na-enye njikọ ozugbo site na. Václav Havel ọdụ ụgbọ elu Prague ruo ebe 92, gụnyere mba ndị dị egwu dịka Kenya, Mexico na Dominican Republic. A ga-enwekwa ụzọ ọhụrụ a na-arụ n'okpuru oge ụgbọ elu oyi, dịka ọmụmaatụ, na Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai na Amsterdam. Mwepụta nke ọrụ ntọala Eurowings ga-enyekwara aka ịmalite ịmaliteghachi na mmepe nke okporo ụzọ ikuku.
N'okpuru usoro ụgbọ elu oyi nke afọ 2021, ndị na-ebu ụgbọ elu 47 ga-eji ụgbọ elu si/gaa Prague. Ụlọ ọrụ German Eurowings, onye otu Lufthansa Group, na-emepe ntọala ya na Ọdụ ụgbọ elu Prague. Airbus A319 ya abụọ ga-arụ ọrụ njikọ na ebe Europe iri na atọ, gụnyere Canary Islands na Barcelona. Ryanair Haziri njikọ site na Prague ruo obodo 26, gụnyere ebe ndị ama ama dịka London, Krakow na Dublin. Otu Smartwings ga-arụ ọrụ njikọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe 20 n'okpuru oge ụgbọ elu oyi, dị ka Canary Islands, Madeira, Hurghada, Paris na Stockholm. A ga-enwekwa njikọ njikọ chata ogologo ogologo gaa na ebe pụrụ iche dị ka Maldives, Punta Cana, Mombasa, Cancún na Zanzibar. Václav Havel ọdụ ụgbọ elu Prague.
N'okpuru usoro ụgbọ elu oyi nke 2021, ndị na-ebu ụgbọ elu 47 ga-eji ụgbọ elu si/ gaa Prague ozugbo. Ụlọ ọrụ German Eurowings, onye otu Lufthansa Group, na-emepe ntọala ya na ọdụ ụgbọ elu Prague. Airbus A319 ya abụọ ga-arụ ọrụ njikọ na ebe Europe iri na atọ, gụnyere Canary Islands na Barcelona. Ryanair ewepụtala njikọ site na Prague ruo obodo 13, gụnyere ebe ndị ama ama dịka London, Krakow na Dublin. Otu Smartwings ga-arụ ọrụ njikọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe 26 n'okpuru oge ụgbọ elu oyi, dị ka Canary Islands, Madeira, Hurghada, Paris na Stockholm. A ga-enwekwa njikọ njikọ chata ogologo ogologo gaa na ebe pụrụ iche dị ka Maldives, Punta Cana, Mombasa, Cancún na Zanzibar. Václav Havel ọdụ ụgbọ elu Prague.
"Obi dị anyị ụtọ ikiri mmalite nke ụzọ ndị a na-arụbu, mmalite nke njikọ na ebe ọhụrụ na-abawanye ugboro ugboro na ụzọ ndị dị adị. N'ihi usoro a na-eme ugbu a, anyị ejirila ihe karịrị nde ndị njem n'etiti ọnwa Ọktoba. Anyị na-atụkwa anya na, n'ihi njikọ ọhụrụ ndị a na-enye n'okpuru oge ụgbọ elu oyi, ọnụ ọgụgụ ahụ ga-anọgide na-eto eto. Anyị ka nọ n'ebe dị anya site na ọnụ ọgụgụ ndị njem e dekọrọ na 2019, mana n'ihe gbasara ọnụ ọgụgụ ebe a na-enye, anyị na-abịaru nso," Jiří Pos, Onye isi oche nke Board of Directors nke Prague Airport, kwuru, na-agbakwụnye, sị: "N'oge na-abịa. oge oyi, anyị na-atụ anya mmụba mmasị nke ndị njem Czech na njem gaa na ebe ndị dị egwu. Obi dị anyị ụtọ na ha ga-enwe ike ịhọrọ n'ọtụtụ nhọrọ wee gaa njem ma na mbufe. "
Site na iji nwayọọ nwayọọ maliteghachi ụgbọ elu ikuku, njikọ eweghachiri eweghachi na Prague. British Airways ga-ejikọkwa Prague na ọdụ ụgbọ elu City dị na etiti London, Czech ụgbọ elu ga-emegharị ụzọ na Copenhagen, Ryanair ga-amaliteghachi ọrụ ozugbo na Barcelona, ​​​​Paris na Manchester, ebe Jet2.com ga-amaliteghachi ụgbọ elu ya na Birmingham. Manchester, Leeds na Newcastle.
Onye isi ọhụụ nke Explore Minnesota Tourism aha ya bụ
Nortal na -enweta oke pere mpe na Talgen
US Capitol complex wepụrụ n'ihi iyi egwu bọmbụ ahụ
Flightgbọ elu si Nur-Sultan na Bishkek na Air Astana ugbu a
Ọgwụ cancer Zantrene ọhụrụ na-echebe obi pụọ na ọnwụ
Ụdị ụgbọ ala egwuregwu ọhụrụ maka ihe na-erughị $30,000
Brinker International bipụtara Q1 2022 ahọpụtara ...
Vienna kpebiri idobe onye isi obodo Adolf Hitler kacha amasị ya
Ntuziaka ahụike COVID-19 ọhụrụ maka Entebbe...
Onye isi oche nke African Tourism Board ga-esonye na...
Mmelite ọhụrụ: Akwụkwọ ntuziaka nlele whale Canada ruru $ 10,000
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde Robots ugbu a na ụlọ ọrụ China
Regis San Francisco na -akpọ aha onye isi njikwa ọhụrụ
Ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu nke ndị ọbịa si na ihe egwu Omicron na-eji...
St. Kitts & Nevis kwụsịrị mmachi na njem ụgbọ elu...